1984, "edemede nke amụma" nke onye edemede Eric Arthur Blair | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
1984 bụ akwụkwọ ọgụgụ kachasị mara mma nke onye edemede na onye nta akụkọ Britain bụ Eric Arthur Blair, ama n’uwa n’iru ya, George Orwell. E bipụtara ya na June 9, 1949, ọ bụghị ọrụ mbụ a tụlere dystopian, karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ aha mere ka okwu a bụrụ ụdị ejiji n'ụwa niile.
Akwụkwọ a bụ nnukwu azụmaahịa azụmaahịa sitere na ntinye mbụ ya na shelf ụlọ ahịa. Kemgbe ahụ, ọ laghachila na usoro ụfọdụ na akara ngosi ahịa. Nnukwu mmeri ikpeazụ emere na 2016, mgbe a hoputara Donald Trump - ka o juru ọtụtụ ndị anya - dịka onye isi ala 45th nke United States.
1 Onye edemede
1.1 Ọtụtụ afọ nke nyocha akwụkwọ akụkọ
1.2 Na umu
2 1984, na nkenke
2.1 Ihe odide
3 Ihe oyiyi
3.1 Amụma sayensị akụkọ ifo?
3.2 Mmehie na-eme mmehie
4 Enwere ọdịnihu?
Eric Arthur Blair mụrụ na June 25, 1903, na Motihari, obodo di n’ime nnukwu ala ndi Britain na India. N'oge ndụ ya, ọ bụ onye ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ megide usoro ọchịchị aka ike na nke ndị ọchịchị. N’oge ntorobịa ya, o nupụụrụ ọchịchị ya isi na Bọma.
Mgbe e mesịrị, ọ gara Spain iji sonyere na ịgbachitere Republic megide mwakpo nke ọchịchị Franco. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka agbagburu ya na Catalonia maka ya (ọ gbapụrụ n'ụzọ ọrụ ebube). Ahụmahụ ndị a niile, yana mmegide nke ọchịchị Nazi na Stalinist, dị n'ọtụtụ ọrụ ya. Ihe doro anya na 1984, nakwa dị ka ya ọzọ iconic akwụkwọ: Nnupụisi na ugbo.
Ọtụtụ afọ nke nyocha akwụkwọ akụkọ
Orwell, onye nta akụkọ, gbara nnukwu mbọ ịnakọta data niile dị na ederede ọ dịkarịa ala afọ ise. Ndị a gosipụtara nkọwa dị egwu na-enye ìhè maka ndị na-ege ntị na etiti narị afọ nke XNUMX. Gụ nyocha akụkọ ihe mere eme a mere ka ọtụtụ ndị ghọta nchịkọta nke ihe omume na-egbu mmụọ nke mere na Europe kemgbe Agha Greatwa Mbụ.
Aha 1984 na-etinye ibé ahụ n'ọdịnihu dị anya, n'ihi nke a n'oge a lebara ya anya dị ka "edemede amụma". Ọ bụ ezie na onye edemede ahụ n'onwe ya mere ka o doo anya karịa otu oge na ọ bụghị naanị ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke mmadụ. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi otu nnyocha nke ihe ndị merenụ ruo ọkara nke narị afọ nke XNUMX.
Nnupụisi na ugbo ebipụtara ya na 1945; 1984 na 1949… George Orwell nwụrụ otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye butere ụkwara ụkwara ogologo oge. Dị ka ọtụtụ n'ime ndị nka ama ama n'oge niile, ọ nweghị ike ịnụ ụtọ ọganiihu nke ọrụ ya. Nke a abụghị obere okwu, ebe a na-ewere ya dịka otu n'ime ndị edemede kachasị ike na narị afọ nke XNUMX dum.
Ọzọkwa, mmetụta ya na-adịgide n'ike nke narị afọ iri ọhụrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, o ji okwu a bu "Orwellian", okwu ugbua iji zoo aka na ndi ochichi aka ike. Ọzọkwa, okwu ahụ na-ezo aka na usoro ndị ma ụma na-ebibi akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke obodo niile iji kwekọọ na ọdịmma ha.
1984, na nkenke
London, 1984. Obodo England, tinyere ndị ọzọ nke British Isles, bụ akụkụ nke Oceania. N'ezie, ha na-anọchite anya otu n'ime ike atọ dị ebube nke ụwa kewara n'ime. Territkèala nke steeti mega a gụnyere Ireland, ndịda Africa, Amerika dum, New Zealand, na Australia.
Mba abụọ ndị ọzọ dị ugbu a bụ Eurasia - nke ndị Soviet Union na Europe ndị ọzọ (ma e wezụga Iceland - na East Asia, ihe jikọrọ China, Japan na Korea. Ndị otu a na-alụ agha mgbe niile (Ihe akụnụba kachasị mkpa, ga-anọrịrị na mmiri ọ bụla). N'otu oge, esemokwu agha bụ usoro zuru oke iji chịkwaa ọnụ ọgụgụ mmadụ.
Winston Smith bụ protagonist na rapporteur. Na-arụ ọrụ n'otu asọmpi ezubere iji mee ka ọchịchị ahụ nwee ike: Ozi nke Eziokwu. Ọrụ ya bụ ịdegharị akụkọ ihe mere eme iji kwado ọdịmma nke gọọmentị. N'oge a, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị ga-ede akụkọ sayensị ma mezie ihe ndekọ eziokwu. N'ihi nke a, usoro ihe juru ebe niile na-asọ ya oyi.
Ọchịchọ ya maka mgbanwe kpaliri ya isonye na iatù ofmụnna nke Nguzogide Julia, nwa agbọghọ ahụ ọ hụrụ n'anya ma nwee otu echiche ahụ.. Mana nzukọ ae chere na ọ bụ mgbanwe ga-abụ usoro ọzọ nke njikwa. E jidere mkpụrụ edemede abụọ ahụ, mekpa ya ahụ ma manye ya ịnakwere ozi gọọmentị na-enweghị mgbagha, ọbụlagodi na ọ bụ "abụọ gbakwunyere abụọ na ise."
1984 na-ewetara chilling nkenke echiche na Ngwa ndị dị ugbu a taa. Okwu mbu edeputara bu Big Brother, bịara na aka na echiche nke ọnọdụ zuru ụwa ọnụ na nyocha zuru ezu. Enwere Ngwa (ihuenyo) enịm iji nyochaa mmegharị ọ bụla nke ndị mmadụ.
Ugbu a, olu kachasị ụda megide Digital Revolution na-egosi na Alexa ma ọ bụ Google taa na-emezu otu ọrụ nchịkọta ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ obere. N'ezie, ọtụtụ n'ime echiche ịgba izu izu gara aga gbadoro ụkwụ n'ụdị echiche a nke Orwellian.
Amụma sayensị akụkọ ifo?
George Orwell kwuru.
"Ndị uwe ojii chere" bụ ihe ọzọ na akara ngosi nke 1984. Ihe mgbaru ọsọ ya kachasị mkpa bụ imekọ ihe ọnụ, yana ngalaba ndị minista (ewezuga Ministri nke Eziokwu, enwekwara nke Lovehụnanya, ụba na udo) na iwepụ echiche nke Onwe. Yabụ, amachibidoro mmadụ iche, dịka ọha mmadụ ga-abụrịrị otu homogeneous nke ụjọ na agha na-achị.
Mmehie na-eme mmehie
N'aka nke ozo, ichikota ihe omuma bu otu ihe omimi miri emi nke Orwell na akuko ya, tinyere iji asusu asusu. Nke a bụ usoro emepụtara iji bepụ okwu na echiche nke ịgafe ihe niile na-enweghị ike iche na ọ nweghị.
N'ụzọ doro anya, myirịta dị n'ụwa nke oge a bara ụba. N'oge ebe a na-akọrọ akụkọ site na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ gaghị ekwe omume ijide oke oke n'etiti eziokwu na ụgha. Na mgbakwunye, na Emoji ha na-abịarukwu nso ma na-eme ka ndị mmadụ ghara ikwu okwu.
Enweghị nzube nke nbibi, mmechi nke 1984 ọ na-enweghị olileanya zuru ezu. Ederede ahụ na njedebe nke eluigwe na ala ebe ịchị achị bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Site na ịkọwapụta nchegbu a maka "ndụ n'ezie", mmadụ ọ ka nwere mgbapụ? ... Ọ nwere ike bụrụ na ọ ga-abụrịrị oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » 1984
6 akụkọ ederede maka Septemba: akwụkwọ akụkọ mpụ, akụkọ ihe mere eme na akụkọ
Etu esi dee akuko